Midnight Appointment သန်းခေါင်ယံရာထူးခန့်အပ်ခြင်း
ယနေ့ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်အယ်လ်ဒီပါတီမှဦးဆောင်၍ နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအတွက် တိုးတက်စေရန် လုပ်ဆောင်နေသည်ဟုဆိုသော်လည်း “ထင်သလောက် အရာမရောက် သွားသလောက် ခရီးမရောက်သည်”မှာ အားလုံးအသိပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယခု အစိုးရသည် ယခင်အစိုးရထက် လုပ်ဆောင်မှုအားနည်းနေကြောင်း၊ မလုပ်တတ်မကိုင်တတ်ဖြစ်နေကြောင်း စသည့်ဝေဖန်မှုမျိုးများအားလည်းနေ့စဉ် လိုလိုကြားသိနေရသဖြင့် ယခုဆောင်းပါးကို ရေးသားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုအချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးလောကကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါက ကမ္ဘာပေါ်တွင် အင်အားအကြီးမားဆုံးဟု ယူဆရသည့် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့သောအဖြစ်အပျက်တစ်ရပ်ကို တင်ပြလိုပါသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ဒုတိယမြောက်သမ္မတဖြစ်သော ဂျွန်အဒမ် (၁၇၉၇-၁၈၀၀) သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ တတိယမြောက်သမ္မတဖြစ်လာမည့် သောမတ်ဂျက်ဖာဆင်အား (၁၈၀၀) ခုနှစ် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့သဖြင့် သမ္မတရာထူးက ဆင်းပေးရတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ ဂျွန်အဒမ်က သမ္မတရာထူးက ဆင်းပေးရမည့်အချိန်တွင် ၎င်း၏ အားကိုးအားထားရသည့်သူများ၊ ၎င်းကို ထောက်ခံသည့်သူများကို နေရာပေးခဲ့ခြင်းအားဖြင့် နောက်တက်လာမည့် သောမတ်ဂျက်ဖာဆင်၏အစိုးရနှင့် ၎င်းကိုထောက်ခံသည့်သူများ၏ဆောင်ရွက်မှုများကို ပျက်ပြားစေရန် ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်၍ ဂျွန်အဒမ်သည် သမ္မတရာထူးသက်တမ်းက ဆင်းရမည့်ကာလ ၁၈၀၁ ခုနှစ် မတ်လပိုင်း ၂ရက်အလိုခန့်တွင်ပင် ၎င်းအားထောက်ခံသည့်သူ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကို (New Circuit Judge) နှင့် (Justice of the Peace) ရာထူးနေရာများတွင် ၎င်းအားထားရမည့်သူများအား ရာထူးခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ရာထူးခန့်အပ်နိုင်ရန်မှာ ရာထူးနေရာအသစ်များအား ဖန်တီးပြုလုပ်ပြီးမှသာ ခန့်အပ်ရမည်ဖြစ်ရာ ထိုရာထူးနေရာသစ်များအတွက် အက်ဥပဒေအသစ်များအား ပြဋ္ဌာန်းကာ ဂျွန်အဒမ်က ၎င်းကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုရာထူးအသစ် ခန့်ထားနိုင်သည့် အက်ဥပဒေအသစ်များအား ပြဋ္ဌာန်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လူအများအပြားက ကန့်ကွက်ခဲ့သော်လည်း ထိုကန့်ကွက်သည့်ကြားကပင် အက်ဥပဒေအသစ်များအား ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ သမ္မတ John Adams သည် ရာထူးအသစ်ခန့်ထားမှုတွင် ၎င်းကိုယ်တိုင်ရာထူးက မနုတ်ထွက်မီရက်အနည်းငယ်နှင့် နာရီပိုင်းအနည်းငယ်ကျန်သည့်အချိန်၌ပင် ၎င်းအားထားရမည့်သူများကို ရာထူးခန့်အပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာ ထိုရာထူးခန့်ထားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်နိုင်ငံရေးလောကတွင် Midnight Appointment သန်းခေါင်ယံ ရာထူးခန့်အပ်ခြင်းဟူ၍ ပြောစမှတ်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ (၄.၃.၁၈၀၁) နေ့၌ Thomas Jefferson သည် သမ္မတသစ်အဖြစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့ပါသည်။
၎င်းသည် သမ္မတအသစ်အဖြစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပြီးနောက် သမ္မတဟောင်း John Adams ပြုလုပ်ဖန်တီးခဲ့သည့် fh Midnight Appointment “သန်းခေါင်ယံရာထူးခန့်အပ်ခြင်း”နှင့်ပတ်သက်၍ တတ်နိုင်သမျှ တားဆီးခဲ့ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ တားဆီးခြင်းရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ -
သမ္မတဟောင်း John Adams မှ သမ္မတအသစ် Thomas Jefferso နှင့် ၎င်း၏ ထောက်ခံသူများ၏ တရားစီရင်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်ချက်များကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးစေမည့်ဆောင်ရွက်ချက်များ မပြုမူနိုင်ရေးအတွက် ဖြစ်ပါသည်။
၎င်းကာလအတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးအတွက် တရားသူကြီးချုပ် John Marshall ၏ သမိုင်းဝင်ဆောင်ရွက်ချက်အား တင်ပြလိုပါသည်။ သမ္မတဟောင်း John Adams က ရာထူးအသစ် ခန့်အပ်ခံရသူများအနက် Marbury မှာလည်း တစ်ဦးအပါအဝင် ဖြစ်ပါသည်။ Marbury ဆိုသူသည် Mary Land ပြည်နယ်က စီးပွားရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သမ္မတဟောင်း John Adams ကို လုံးဝထောက်ခံသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ Marbury က ၎င်းတို့အား ရာထူးခန့်အပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ Madison (Secretary of the State) (အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ အတွင်းဝန်ရာထူး) အား ကြော်ငြာပေးရန် အကြိမ်ကြိမ်သွားရောက်ခဲ့သော်လည်း Madison က Marbury ၏ တင်ပြမှုအား အကြိမ်ကြိမ်ငြင်းဆိုခဲ့ခြင်းကြောင့် Madison က Marbury အား တရာစွဲဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ တရားစွဲဆိုနေစဉ်ကာလအတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ကွန်ဂရက်တွင်လည်း ထိုတရားစွဲဆိုသည့်ပြဿနာနှင့်ပတ်သက်၍ အကြီးအကျယ် အငြင်းပွားမှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့်အတွက် အမေရိကန်တရားလွှတ်တော်ချုပ်၌် ထိုအမှုအား ၂ နှစ်ကျော်ခန့်အကြာတွင်မှ အမိန့်ချမှတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
ထိုအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရုံးထိုင်တရားသူကြီးမှာ တရားသူကြီးချုပ် John Marshall ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် Willan cushing, Willan Paterson, Sanuel chase, Bushrod Washinton Alted Meore တို့ဖြစ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် John Marshall, Paterson, Choose Washing ton တို့မှာ အယူအဆတူညီခဲ့ပါသည်။
အမှုအား တရားသူကြီးချုပ် ဂျွန်မာရှယ်၏ အဓိကသုံးသပ်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
Section 13 of the Judiciary Act of 1789 is unconstitutional to the extent it purports to enlarge the original jurisdiction of the Supreme Court beyond that permitted by the Constitution. Congress cannot pass laws that are contrary to the Constitution, and it is the role of the judiciary to interpret what the Constitution permits. ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါကဲ့သို့သုံးသပ်၍ Marbury ၏ အာဏာပေးစာချွန်တော်လျှောက်ထားမှုမှာ တရားရုံး၏စီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်း မရှိသောကြောင့် စာချွန်တော်အားခွင့်မပြုနိုင်ဟူ၍ အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအမိန့်မှာ ၁၈၀၃ ခုနှစ် တွင် ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ ချမှတ်ခဲ့သောအမိန့်ဖြစ်သောကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက် အလွန်အရေးပါလှသောအမိန့်တစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ တရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ ဆုံးဖြတ်သည့်အမိန့်မှာ မှတ်ကျောက်သဖွယ်ဖြစ်ခဲ့ရပြီး ထိုသို့ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ John Marshall ၏ ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ သုံးသပ်သောအမြင်ဖြစ်ပါသည်။
John Marshall က သုံးသပ်ခဲ့သည်မှာ -
“ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည်သာ အမှန်စင်စစ် ဥပဒေဖြစ်ပြီး၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် နိုင်ငံတော်၏မူဝါဒရေးရာနှင့်ပတ်သက်သည့် ဖော်ပြချက်မျိုးမဟုတ်သကဲ့သို့ နိုင်ငံရေး၏စံနှုန်းမဟုတ်ပါ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေသည် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍတို့ကို ခွဲခြားနိုင်စေရန်အတွက် ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းဖြစ်သည်” ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ နိုင်ငံ၌ တွေ့ကြုံလာသည့်ပြဿနာများကို တာဝန်ရှိသူများက နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးစီးပွားတစ်ရပ်တည်းကို ရှေးရှု၍ သတ္တိရှိရှိဖြင့် တာဝန်ကျေစွာဆောင်ရွက်ခဲ့၍သာ အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် ကမ္ဘာ၌ ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာဖြင့် ရပ်တည်နေနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဤကဲ့သို့ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော နိုင်ငံရေးရာနှင့်ပတ်သက်၍ တင်ပြရသည့် အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ ဤနိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြားခဲ့ရသော စကားရပ်တစ်ရပ်ဖြစ်သည့် “မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်နှင့် ဆောင်ရွက်ရမည်၊ အနောက်နိုင်ငံများ၏ပုံစံကို ကူးယူ၍မရ” ဟူသော ခံယူချက်အား အုပ်ချုပ်သူများအနေနှင့် ပထမဦးစွာပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ကြောင်း တင်ပြလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ဆိုသူများကြောင့် နိုင်ငံတော်၏ သဘာဝသယံဇာတများလည်း ခန်းခြောက်သွားခဲ့ရပြီး ယနေ့တိုင် “မွဲမြဲမွဲလျက်၊ ကွဲမြဲကွဲလျက်ပင်”ဆိုသည်မှာ လက်တွေ့ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ကိုပင် “မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်” ဟူ၍ ဆက်လက်ကြွေးကြော်နေပါက “ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်စနစ်သို့” မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်ဖြင့် ပြောင်းလဲရန်ပင်ရှိပါတော့ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။